Kubloga uye Kubika - Solidarity Bhuku - BATSIRA vakwegura muEthiopiya
Kubloga & Kubika ndeye kubatana kwekutanga inoitwa ne RubatsiroAge International Spain Foundation mukubatana naThermorecetas kwe kuunza pamwechete mamwe emablog akanaka muSpanish gastronomy, inonyanya kuzivikanwa uye inozivikanwa, muchirongwa chimwe chete icho chinangwa chiri chekuita kwedu zvishoma uye kurwisa nzara nehurombo munyika, tichiita zvatinoita zvakanyanya: kubika kuburikidza nemablog edu.
A solidarity cookbook inosanganisira makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva kune mamwe akanakisa ekubika mablog muSpain kurwisa nzara nehurombo
Kwe chete € 5 unogona kubatana nechakanaka chikonzero. Mari dzakawanikwa kubva mukutengesa kwebhuku remaresipi edhijitari dzinoenda zvakanangwa kubatsira iyo HelpAge International Spain Foundation kupa mari muzvirongwa zvayo muEthiopia kuzadzisa izvo zvinodikanwa zvekudya zvevakwegura. Kwako harisi basa hombe asi kwavari ndiwo mutsauko pakati pekugona kana kusakunda hurombo.
TENGA EBOOK - € 5
Kuti fry asiparagasi
Zvikafu zvinotapira uye zvinonaka
Kicheni ine zvishoma
Bika neCarmela yangu
Kubika pakati pemiti yemiorivhi
Iyo Agora yeNgirozi
Lolita mubiki wepastry
Kwete Masweets chete
Yakakwana Cupcake Target
Flavors uye Nguva